फेसबुकमा जनजाती र ठकुरीलाई तथानाम गालीगलौज गर्ने आत्माराम को हुन? « Postpati – News For All
फेसबुकमा जनजाती र ठकुरीलाई तथानाम गालीगलौज गर्ने आत्माराम को हुन?
सामाजिक संजाल फेसबुकमा एक जना आत्माराम थपलिया भन्ने ब्यक्तिले विभिन्न जातजाति बिरुद्द निरन्तर गालीगलौज गर्दै अपशब्द लेखेर पोष्ट गरेका छन।
धादिङ घर ठेगाना उल्लेख भएका आत्मारामले केहीदिन यता नेपालमा रहेका मङ्गोलियन मुलका जातजाती र ठकुरीहरुलाइ पटक-पटक गालीगलौजको भाषा आफ्नो फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै अपमान गरि रहेका छन।
आत्मारामले विभिन्न धर्मावलम्बीहरुलाइ आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गर्दै गालीगलौज गरिरहेका छन। आफुलाइ हिन्दु धर्म मान्ने बताउने थपलियाले नेपालका बुद्ध, क्रिश्चियन लगायत अन्य धर्मावलम्बीहरुलाइ खुलमखुल्ला अपाच्य हुनेगरि गालीगरिरहेका छन।
सामाजिक संजालमा तथानाम गालीगर्ने आत्माराम थपलिया धादिङ घरभइ हाल बिदेशमा रहेको बुझिएको छ। उनको फेस्बुकमा भेटिएको ठेगाना अनुसार उनको घर धादिङको त्रीपुरासुन्दरी गाउँपालिका ७ रहेको छ। साथै उनले आफ्नो फेस्बुकमा बाबा आमाको नाम सहित फोटो समेत पोष्ट गरेका छन।
उनको आपत्तिजनक पोष्टमा धेरैले बिरोध गर्दै प्रतिक्रिया जनाएका छन। बिरोध गर्नेहरुलाइ लक्षित गरि आत्मारामले भनेका छन `आफ्ना स्टाटसका कारण कसैलाई असर परेको भए अदालत वा प्रहरी कहाँ मुद्दा हाल्न भन्दै ठाडै चुनौती दिएका छन।
यसरी सामाजिक संजालमा अराजक बन्दै सामाजिक सद्भावमा असर पर्नेगरि बिखन्डन मच्चाउने तत्वहरुलाइ साइबर अपराध कानुनको दायरामा ल्याइ सम्बधित निकायले कार्बाही गर्न जरुरी छ। यसरी अमर्यादीत हर्कतले समाजिक सद्भाव भड्काउने निश्चित छ।
१७ श्रावण २०७४, मंगलवार को दिन प्रकाशित